टेलर मिशेल Momsen जुलाई 26, 1993 मा जन्म भएको थियो। उनको गृहनगर - सेन्ट लुइस, मिसौरी मा स्थित। उनको आमाबाबुले नाम मिशेल Collette। तारा Sloane नामको बहिनी छ। पहिलो पटक संसारको त्यो तीन वर्षको हुँदा भविष्यमा सेलिब्रिटी देखे। त्यो शेक एन Bake लागि व्यावसायिक मा तारा अङ्कित।
"मृत्यु को अगमवक्ता", "द Grinch - क्रिसमस चोरेछ," "Hansel र Gretel"
एक बच्चाको रूपमा, टेलर Momsen शीर्षक चलचित्र मा मह द्विपक्षीय Svon प्ले गर्दा देखेको थियो, धेरै सानो भूमिकाको मा "अगमवक्ता मृत्यु।" यो फिल्म पनि उहाँले भाग अभिनेता डेनिस कूदनेवाला लिए। सानो भूमिकाको देखा पर्न - केटी चाँडै नियमित टिभीमा निमन्त्रणा भयो।
"-, क्रिसमस चोरेछ भएको Grinch" रन हावर्ड द्वारा निर्देशित टेलर 2000 मा रिलिज देखे एक सेलिब्रिटी भयो। त्यसपछि केटी सात वर्ष पुरानो थियो, र त्यो सिन्डी लू प्ले। फिल्म पनि Dzhim Kerri तारा अङ्कित। यो फिल्म पनि "ओस्कार" जित्यो भनेर उल्लेख गर्नुपर्छ। सम्झना, के फिल्म छलफल भएको थियो? कपाल बारेमा हरियो प्राणी Grinch नाम। उहाँले Ktograd भनिने सहरमा बस्ने, र उहाँले कुनै मित्र थियो। एक पटक Grinch एकदम, मान्छे मा निराश सबै आहत र एक उच्च पर्वतमा भयो, सभ्यता टाढा स्थित ...
एक समय पछि, केटी "Hansel र Gretel" भनिन्छ बच्चाहरु लागि कल्पना फिलिम, जी Tunnicliffe द्वारा निर्देशित मा एक अभिनय गर्ने कलाकार भूमिका थियो। यो अभिनेता (टेलर Momsen, Haui Mendel र Dzheykob Smit) धेरै राम्रो तरिकाले आफ्नो भूमिकाको प्ले छ उल्लेख गर्नुपर्छ। र कसरी तिनीहरूलाई अरू केही आशा गर्न सक्थे? यो चित्र देखे जो सबैसँग, टेलर Momsen मेकअप बिना कस्तो देखिन्छ ठूलो टिप्पणी। यो फिलिम आज छोराछोरी दन्तिये विश्वास भएनन् छ भन्ने तथ्यलाई थियो। तैपनि, तिनीहरू आमाबाबुले तिनीहरूलाई पुस्तकहरू कसरी पढ्न सुन्न प्रेम। त्यसैले बुबा पुरानो मात्रा र छोरी Hansel र Gretel बारेमा परी कथा को मद्दत संग उनको खामोशी गर्न ओछ्यानमा मा बसे पनि कोठरी को बाहिर मिल्यो।
"जासूस बच्चाहरु 2," "हामी थिए सैनिक" गलतफहमियहरुलाई, "Sherlock सुरक्षित"
टेलर चाँडै निर्देशकमा तारा अङ्कित रबर्ट रोड्रीगेज गरेको परिवार अवलोकनका लागि अभिप्रेरित जासुसहरूलाई सन्तानहरू बारेमा फिलिम। त्यहाँ उनले अलेक्जेन्डर छोरी को नाम राष्ट्रपति को भूमिका खेलेका।
वर्ष 2002 बालिका लागि अत्यन्तै फलदायी थियो। त्यो ग्रेग Keener, Medilin Stow र मेल गिब्सन जस्ता luminaries काम गर्न भाग्यशाली थियो। तिनीहरू सबै जे मूर र जे Galloway काम आधारित ऐतिहासिक फिल्म आर वालेस, "हामी सैनिक थिए" हकदार मा तारा अङ्कित। टेलर Momsen, को प्रशंसक लागि ठूलो चासो को एक जीवनी, राम्रो खेले।
र त्यहाँ सम्म यो कमेडी श्रृंखला गलतफहमियहरुलाई नेतृत्व भूमिका तोकिएको थियो, तर त्यो दुर्भाग्य, टेलिभिजनमा देखाइएको गरिएको छैन, एक जवान तारा चार वर्ष केही सुनेको त थियो।
2006 मा, टेलर Momsen यसको गतिविधिहरु पुन: सुरु र एउटा चलचित्र खेल्न जारी छ। त्यो आर STEIGER को स्मृति मा गोली थियो जो परिवार फिलिम "बचत Sherlock" मा, उदाहरणका लागि, भाग मिल्यो। केटी Samantu Uollis रूपमा reincarnated।
"Superpes", "Paranoid पार्क"
2007 मा, Momsen फिल्म एफ Du चौधरी "superpes" भनिन्छ मा मली रूपमा तारा अङ्कित। यो एक राम्रो काल्पनिक विज्ञान चलचित्र हो, जो को हेर्ने मात्र एक सुखद अनुभव हो।
2007 केटी एक वास्तविक सफलता ल्याए। त्यो फिल्म श्री भ्यान संत "Paranoid पार्क" भनिन्छ मा राम्रो खेले। सेट मा त्यो दानियल LUPI र Gabe Nevins काम गर्न भाग्यशाली थियो।
"गपशप केटी", "शङ्कालु थोमा"
2007 मा, केटी कास्टिंग मा भाग लिन निर्णय गरे। म जो सिरियल फिल्म प्ले हुनेछ Dzhenni Hamfri अभिनेत्री लागि रोज्न "गपशप केटी।" कास्टिङ मा उचाइ, वजन, टेलर Momsen, र यसका सबै मापदण्डहरु एकदम यो भूमिका लागि उपयुक्त हो कि निर्णय गरे। र पुष्टि अभिनेत्री, तर, त्यो आफ्नो सफलता को निश्चित थियो। यो चित्र, यो मैनहट्टन मा एक राम्रो शैक्षिक संस्था को विद्यार्थी बारेमा प्रश्न थियो। तिनीहरूले नियमित गपशप केटी ब्लग मा आफ्नो प्रसिद्ध स्कूल मा घटना बारे पढ्नुहोस्। उनको पहिचान अज्ञात थियो, तर केही कारणले, समाचार को सत्यता मा विश्वास गर्छन्।
2008 मा, दर्शक को कमेडी चलचित्र "शङ्कालु थोमा", गोली निर्देशक एम Blutmanom द्वारा श्रद्धा थियो। केटी यसलाई मा म्याडिसन प्ले।
यो सुन्दर लापरवाह
लागि टेलर Momsen यसको सांगीतिक गतिविधिहरु को एक विशेष अर्थ छ, त्यो एक संगीतकार, guitarist र ब्यान्ड को गायक भएको सुन्दर लापरवाह छ। गर्मी 2009 वसन्त देखि, को ब्यान्ड विश्व toured। दर्शक समूह गरेको मुग्ध पार्ने संगीतको द्वारा, तर पनि गायक को उपस्थिति मा मात्र होइन रोमाञ्चित। रातो ओठ संग प्लेटिनम गोरा ठूलो हेर्न।
लगातार सडक शो स्पष्ट जवान कलाकार को अविश्वसनीय सफलता देखाए। गर्मी 2010 मा, त्यो मा मिस केही नाम उनको पहिलो संगीत भिडियो तारा अङ्कित। चाँडै अमेरिकी शहर को patrols थाले। 2011 मा, गायक यो अब चलचित्र बनाउन हुनेछ, र संगीत पेसा आफूलाई समर्पित भन्नुभयो।
टेलर Momsen: प्रेम जीवन
"गपशप केटी" मा भूमिका केटी लागि भविष्यसूचक भयो नै कुरा जीवनमा उनको भयो बारेमा: केही समय सम्म अब यो एक उदाहरणीय बच्चा छ, र त्यसपछि एक वास्तविक विद्रोही भए। गायक आदर्श वाक्य जस्ता कुरा जान्छ: "छैन के को बाहिर आफैलाई नगर्नुहोस्, र तपाईं कसैले तपाईंलाई रुचि छैन भने, यो यी मानिसहरू बाटोमा छैन भन्ने हो।" टेलर कर्मचारीहरु एक विशिष्ट मास्क लगाउनुहुन्छ गर्नेहरूलाई तिनीहरूलाई लिए छोड्न सक्दैनौं।
त्यो लगभग एक ब्रेक बिना दिन र रात दुवै काम गर्न सक्छन्, र त्यो यो किनभने बाल्यकाल देखि गर्न accustomed यस्तो शासन गर्न, एकदम सजिलो छ वहन।
टेलर striptizerskuyu जूता प्रेम गर्नुहुन्छ। जब जूता छनौट त्यो सधैं उच्च एडी गर्नेहरूलाई रुचि। किन मान्छे उनको जूता ध्यान छैन गायक बुझ्न छैन। जब उनले उच्च एडी मा मञ्चमा देखिन्छ, मान्छे तरिका आँखा मेकअप टेलर Momsen छलफल गर्न, हुनत केटी एक लामो समय को लागि परिवर्तन भएको छैन थाल्छन्।
गायक नवीनतम फैशन रुझान अनुसार ड्रेस प्रयास र धेरै ध्यान दिएर आफूलाई पछि जो मानिसहरू रुचि छैन। त्यो आफूलाई भलाइ कसलाई थाह देखि नै निर्माण गर्न प्रयास गर्दै नगर्ने रहने तर, मान्छे रुचि। यसलाई मानिसहरू छैन सार्वजनिक राय बारेमा पनि चिन्तित हुनुहुन्छ र आफ्नो सुविधा मा त्यसो गर्ने आकर्षित। गायक कि बन्द देखाउने र नवीनतम फैशन मात्र बालिका र केटाहरू सक्छन् छैन अड्केको मा पोशाक विश्वास गर्दछन्। साथै, गायक अरू कसैको टोली मा फिट गर्ने प्रयास कुनै पनि हालतमा जो मान्छे खडा गर्न सक्दैन।
प्रशंसक दर्शाउन कसरी स्लिम र सुन्दर टेलर Momsen। उचाइ, तौल तारा बस सिद्ध, यस्तो मापदण्डहरू हरेक केटी को सपना। तपाईंले पहिले नै चासो? वृद्धि महिलाहरु 167 168 सेमी र तौल 50 देखि 54 किलो गर्न लिएर देखि दायरा।
टेलर उदास मौसम, इङ्गल्याण्ड को राजधानी मा अक्सर छ जो प्रेम गर्नुहुन्छ स्वीकार्छन्। कहिले काँही, को पाठ्यक्रम, त्यो केही तन प्राप्त गर्न समुद्र तट मा झूठ गर्न चाहन्छ, तर यो शायद हुन्छ। तसर्थ, यो एकदम उनको लिङ्कमा र बादल, र वर्षा लागि, इङ्गल्याण्ड को राजधानी बस्न सक्षम छ। तथापि, यो सिर्फ कुरा छ, र लन्डन गायक जाँदै छ सार्न।
Grigoriy Yurchenko - जीवनी र काम
समूह "कारखाना": ताराहरू गर्न thorns मार्फत
फिक्सिंग isofix - कार मा बच्चा को अतिरिक्त सुरक्षा
Ichthyol मल। निर्देशनहरू
सन्दर्भ 2-पिट मा कोड 114। मानक कर कटौती
सारांश: "द Oresteia" Aeschylus द्वारा। सारांश र विवरण: Aeschylus 'Oresteia को "को ट्रिलजी
सात देशहरूको समूह - गिरावट वा विकास गर्न प्रोत्साहन को शुरुवात?